/ ngwaahịa / Hormones / Desogestrel ntụ ntụ (54024-22-5)
Rating: SKU: 54024-22-5. Category: Hormones
Desogestrel ntụ ntụ achọpụtara na 1972 ma webata ya maka ọgwụ na Europe na 1981. Ọ bịara dị na United States na 1992. Mgbe ụfọdụ a na-akpọesogestrel dị ka "ọgbọ nke atọ" progestin. Nke ahụ dị ebe niile dịka progestogen-naanị "obere pill" maka njikwa ịmụ nwa.Desogestrel na-ere ahịa n'ọtụtụ ebe n'ụwa .Ọ dị dị ka ọgwụ ọgwụ.
Usoro Molecular: C22H30O
Molekụla arọ: 310.47
Aha aha: Cerazette, Mircette, Desogestrel ntụ ntụ, Cerazette ntụ ntụ, Mircette powdrr, 54024-22-5
Desogestrel ntụ ntụ (Cerazette) bụ mbadamba ọgwụ mgbochi ọnụ, nke a makwaara dị ka 'obere pill'. Cerazette na-enye nchebe ozugbo megide afọ ime, mgbe ewere ya na ụbọchị mbụ nke oge gị. Ọ dị iche na ọkọlọtọ jikọtara ọgwụ mgbochi n'ihi na ọ nwere naanị otu n'ọrụ mgwa ihe, keakamere progestogen.
Dika otutu ogwu eji egbochi ogwu, Cerazette bu uzo di irè nke nchedo ma gosiputa na o kariri 99% n’oru ogwu. Ọ na-pụtara na-enye aka na mbenata omume nke erughị ala na-egbu mgbu oge. Inweta ọgwụ mgbochi a na-enye gị mgbanwe, n'ihi na n'adịghị ka ọtụtụ progestogen ndị ọzọ na-egbochi ọgwụ mgbochi, ị nwere ike were mkpụrụ ọgwụ gị ruo elekere 1 karịa mgbe oge gị.
-N'ihi na ọ nwere naanị progestogen, ọ dabara adaba iji ma ọ bụrụ na ịnweghị ike, ma ọ bụ họrọ karịa, jiri ọgwụ mgbochi ọgwụ na estrogen
Mgbe eriri ahụ tọgbọ chakoo, ị ga-ebido site na eriri ọhụrụ nke ntụ ntụ Desogestrel (Cerazette) n ’echi ya - na - enweghị nkwụsị na n’achọghị ka ọbara gbaa gị.
Desogestrel ntụ ntụ (Mircette powdrr) na-emekwa mgbanwe iji gbanwee ogo nke akpa nwa (endometrium). Nke a na - egbochi ọghọm nke àkwá ọ bụla eturu etuto na mgbidi akpa nwa, si otú a gbochie afọ ime.